Ny vovoka Orlistat (96829-58-2) Mpanamboatra & orinasa
AASraw dia mamokatra vovoka NMN sy NRC amin'ny ampahany!
/ Products / Vokatry ny vinaingitra / Vovoka Orlistat
Rating: SKU: 96829-58-2. Sokajy: Vokatry ny vinaingitra
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny vokatra azo avy amin'ny gram amin'ny filamatry ny Orlistat (96829-58-2), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Orlistat vovoka no tototry derivative ny lipstatin, dia azo heverina ara-boajanahary inhibitor ny pancreatic lipases mitoka-monina avy amin'ny bakteria Streptomyces toxytricini. Orlistat dia zava-mahadomelina natao hiarovana ny vatana. Na dia izany aza, noho ny fahatsorany ara-pifaneraserany dia misy stabilité, orlistat dia voafidy amin'ny lipstatin ho fampandrosoana ho toy ny fitsaboana fanoheran-tena.
Orlistat video vovo
Orlistat poids fototra
Name: Orlistat vovoka
Formula Molecular: C29H53NO5
Molekular lanja: 495.7
Anaran'ny vokatra: Orlistat
Maherin'ny antsasaky ny mponina manerantany no nanandrana ny programa fitantanana lanjany, toy ny sakafo, fanatanjahan-tena, fandidiana, na fanafody. Ireo fanafody fanalefahana lanja rehetra ireo dia tsy mandaitra raha tsy mahatoky azy ireo ianao ary manaraka ny torolalana ho an'ilay farany. Na izany aza, ny fifidianana ny fandidiana na ny fitsaboana dia mety hiteraka fahavoazana rehefa tsy mitandrina tsara ianao.
Ny rafitra ara-tsimika ao amin'ny Orlistat (constitution 3-D)
Ny rafitra ara-tsimika ao amin'ny Orlistat (constitution 2-D)
Toetran'ny simika ao amin'ny Orlistat
Anarana fananana Property Value
Fepetra takiana amin'ny vola 1
Famaritana ny mari-pahaizana stereocenter 0
Toeran'ny mpitsoa-ponenana atokana 4
Hevitra Atomin'ny Heavy 35
Fepetra fandefasana 0
Mampifanaraka ny rakotra marina
Exact Mass 495.392 g / mol
Topolojaratra Polarika 81.7 A ^ 2
Toe-potoana mitodika amin'ny teboka 23
Fepetra takiana amin'ny rano fisotro 5
Toeran'ny mpanome rano 1
Molecular Weight 495.745 g / mol
Famaritana tsotra momba ny vovo Orlistat
Iray amin'ny drariny fa ianao dia ho tonga amin'ny fikarohanao mba hahita ny fomba mahomby indrindra ny fitsaboana zava-mahadomelina dia Orlistat. Amin'ity revirevin'ny Orlistat ity, hahita fanazavana manan-danja ianao, anisan'izany ny fomba amam-panao, sy ny fomba tokony hampiasana azy, mba hahafahanao manapa-kevitra raha mety izany.
Inona ny Orlistat?
Orlistat, izay azo amidy toy ny fanafody fitsaboana amin'ny anaran'ny dokambarotra Xenical, dia fanafody fanodinkodinam-panafody izay noforonina mba handaminana olana goavana toy ny fiterahana, ary koa ny fepetra hafa mifandraika amin'ny lanjany. Ity dia natolotr'i GlaxoSmithKline ho toy ny zava-mahadomelina mahery setra antsoina hoe Alli, any Etazonia sy Royaume-Uni.
Ny endriky ny famokarana Orlistat dia hita any amin'ny firenena maromaro. Hatramin'ny 2000, dia nohamarinina ho fanafody S3 amin'ny toeran-dronono any Aostralia. Ny fanomezan-dalànan'i Orlistat ho toy ny fanafody tranainy iray dia nampiady hevitra tany Etazonia. Nanohitra imbetsaka momba ny herisetra sy ny filaminan'ny vondrona mpiaro ny mpanjifa fantatra amin'ny anarana hoe Citizen Public.
Ny asan'ny Orlistat dia toy ny «inhibitor lipase», izay midika amin'ny ankapobeny fa manakana ny tsy hisian'ny tavy amin'ny sakafo, amin'izay hampihena ny kaloria entinao. Toy ny fanafody maro hafa, Orlistat dia natao hampiasaina miaraka amin'ny fanovana fomba fiainana hafa toy ny fanatanjahan-tena sy ny sakafo. Ny fandinihana ara-pahasalamana dia mampiseho fa ny olona mifikitra amin'io fitambarana io dia mety hahavery roa na telo kilao mihoatra noho ireo izay tsy mampiditra ny zava-mahadomelina ao anatin'ny fitondrany fahavoazana.
Ny iray amin'ireo hevitra mahaliana momba an'i Orlistat dia tsy vitan'ny hoe manampy anao hihena ny lanjany, fa mampihena ny tosidra koa izany. Ankoatr'izay, ity medikaly fitantanana lanja ity dia heverina fa hisorohana ny fanombohan'ny karazana 2 karazana ao amin'ny olona mahatsapa ny fiovan'ny fomba fiainana.
Na dia misy tombontsoa Orlistat maromaro aza tokony ho faly, misy ihany koa ny vokatra hafa Orlistat tokony hojerena. Ny voka-dratsy ateraky ny pilina mavesatra indrindra dia ny steatorrhea. Ity dia aretina gastrointestinal izay miavaka amin'ny fitoeran-diloilo sy malalaka. Soa ihany fa mihena ny soritr'aretina rehefa mandeha ny fotoana.
Orlistat Mekanisma amin'ny hetsika
Orlistat dia mpanakan-tsoroka mahery vaika amin'ny tsinay. Ity zava-mahadomelina ity dia mpanakanana tranokala mavitrika amin'ny lipase gastrointestinal. Ny zava-mahadomelina dia mamorona fifamatorana miaraka amin'ny tranokala serine mavitrika amin'ny lipase pancreatic sy gastric, ka manakana ny hetsika ataon'izy ireo sy misoroka ny tavy amin'ny sakafo tsy hidoly sy hiditra ao anaty rano. (NCI04).
Amin'ny teny tsotra, Orlistat dia manamaivana ny fahavoazana amin'ny fihenanam-po amin'ny alàlan'ny fihenanam-pandaminana sy ny mitefom-panafody, izay ny enzymes tena manan-danja ao anaty tsinay izay mamotika triglycerides. Rehefa voasakana ireo lipase ireo, dia tsy azo atao ny manalefaka ny fihanaky ny triglyceride avy amin'ny sakafo fihinanao.
Ny fanafody fanafody dia nalaina am-bava sy nalaina indray mandeha; Ny fanesorana lipase ao an-toerana dia ao anatin'ny tranokala GI. Vitsy monja amin'ny zava-mahadomelina no atokisana ao amin'ny vatana, ary ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina dia afindra amin'ny alalan'ny gazo.
Ny fandinihana vao haingana dia nahita fa ny Orlistat dia mety hampidi-doza ny enzyme izay tafiditra ao anatin'ny fampielezana ny sela kansera. Na izany aza, ny vokatry ny zava-mahadomelina momba ny zava-mahadomelina (toy ny fihenan'ny sela tsy misy taratra na ny bioavailability) dia manakana ny fampiasana azy ho toy ny mpitsabo mpanimba. Tao anatin'ny fanadihadiana iray dia nikaroka fikarohana momba ny proteinina ny mpikaroka mba hahitana taratra vaovao momba ny zava-mahadomelina, anisan'izany ny tarigetra.
Amin'ny fatra mahazatra 120 mg in-3 isan'andro isan'andro alohan'ny sakafo, ny pilina mampihena ny lanjan'ny orlistat dia manakana ny 30 isan-jaton'ny tavy fihinana tsy ho tafiditra ao anaty vatana. Ny fandraisana fatra bebe kokoa dia tsy manome vokatra mahery vaika.
Orlistat dia ampiasaina ho zava-mahadomelina fitantanana lanja. Safidy tsara ho an'ny olona matavy loatra na marary izany. Io fanaintainana fanafody io dia asaina ampiasaina amin'ny olona manana olana ara-pahasalamana be loatra. Mampanantena izy fa hanampy ny olona tsy hoe handany lanjany, fa manampy koa ny misakana azy ireo tsy hahazo ny lanjany. Amin'ny fanaovana izany, dia manampy amin'ny fampihenana ny mety hisian'ny fiakaran'ny tosi-drà, diabeta, aretim-po, ary loza maro hafa momba ny fahasalamana mifandray amin'ny fiterahana.
Ny habetsaky ny fahavoazana aorian'ny fakana ny Orlistat dia miovaova amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa. Ny mpikaroka izay nandalo fitsapana momba ny fitsaboana niompy taona iray dia nahatsikaritra fa teo anelanelan'ny 35.5 percent sy 54.8 isan-jaton'ny lohahevitra dia nahavita ny fihenan'ny vatana kokoa ny 5 isan-jato, na dia tsy voatery matavy be aza ny habokana very. Momba ny 16.4% -24.8 amin'ny lohahevitra dia nahomby tamin'ny farafahakeliny ny fihenan'ny 10 isan-jato ny vatana. Rehefa tsy noraisina intsony ny Orlistat ireo olom-bitsy dia maro tamin'izy ireo no nitombo hatramin'ny 35 isan-jaton'ny lanjany nahavery azy ireo.
Dosage of Orlistat
Orlistat dia tonga amin'ny endrika turquoise, kapila mafy-gelatin izay misy pellets vovoka ary milanja 120-mg. Ny fatra isan'andro resahina dia kapsily telo isan'andro. Tsy tokony hihinana ny pilina telo rehetra ianao isaky ny mandeha, fa alao ny takelaka tsirairay miaraka amin'ny sakafo lehibe misy tavy, izany hoe iray ho an'ny sakafo maraina, iray ho an'ny sakafo atoandro ary iray ho an'ny sakafo hariva. Azonao atao ny mihinana pilina tsirairay amin'ny sakafo na adiny iray aorian'ny sakafo. Raha sendra diso anjara matetika ny sakafo iray, na raha tsy misy tavy ny sakafo, dia azo esorina ny fatra Orlistat. Ny doka ambonin'ireo fatra isanandro voatondro dia tsy hita izay manome tombony fanampiny.
Ny Orlistat dia mahomby indrindra rehefa mifangaro amin'ny paikady fatiantoka hafa toy ny fitsaboana amin'ny sakafo voalanjalanja, milamina loatra-kalorie ary fampiharana tsy tapaka. Nolavina ianao haka ny lozam-pifamoivoizana miaraka amin'ny sakafo izay misy kalôria 30 isan-jato avy amin'ny matavy. Ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina dia hita raha vantany 24-48 ora aorian'ny fakana doka.
Ny Orlistat dia hita fa mandaitra amin'ny fanamaivanana ny fandraisana ny otrikaina mety levona amin'ny tavy sy beta-carotene. Araka izany, ny olona mihinana pilina dia amporisihina hitondra izany miaraka amina vitamina marobe izay misy vitamina azo solika afaka manome sakafo ampy. Soso-kevitra ny haka ny fanampin-tsakafo vitamina roa ora farafahakeliny alohan'ny na aorian'ny fihinanana Orlistat.
Raha ho an'ireo marary mahazo fitsaboana cyclosporine, dia nomena toromarika izy ireo hikarakara cyclosporine farafahakeliny 3 ora aorian'ny fakana an'i Orlistat. Ho an'ireo izay mahazo fitsaboana levothyroxine, dia ampirisihina izy ireo hametraka fitsaboana levothyroxine farafahakeliny ora 4 aorian'ny fakana ny Orlistat. Ireo izay mitondra Orlistat sy levothyroxine dia tokony hijerena tsara ny fiovana amin'ny fiasan'ny tiroida.
Talohan'izay, nalaina tamin'ny ordinateran'ny dokotera na pharmacista ny orlistat. Na izany aza, tao amin'ny 2007, nankatoavin'ny US Food and Drug Administration io ho an'ny tsenan'ny tambajotram-barotra, noho izany, manome azy ho an'ny rehetra.
Andramo ny fanehoan-kevitra mampihetsi-po
Alohan'ny handraisanao an'io zava-mahadomelina io dia tsara ny miresaka amin'ny dokotera momba ny fihetsiketseham-pandrenesana mety hitranga aminao. Orlistat dia misy zavatra tsy azo ampiasaina, izay tsy mety aminao, ka miteraka fihetseham-po mahery vaika sy fiantraikany hafa. Anisan'izany ny cellulose, mikrokrystallina, gelatine, kilaometatra, ary glycolate grenady.
Diniho ny tantaran'ny fitsaboana anao
Mila mizara amin'ny dokotera ianao na dokotera momba ny toe-pahasalamanao mety ho azonao. Izany dia satria ny orlistat dia mifanohitra amin'ny tsy fetezana manokana sy ny olana, indrindra fa ireo mifandray amin'ny digestion.
Raha mijaly amin'ny iray amin'ireo fepetra etsy ambany ianao, dia tsara ny mitady fomba fijery hafa avy amin'ny matihanina.
Izany dia fihenam-bidy tompon'andraikitra amin'ny tsy fahampian'ny fihinanana sakafo ara-tsakafo eo amin'ny rafitra GIT. Tokony hotadidinao fa ny orlistat dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ny famafazana ny fatina. Noho izany, ity dia hiafara amin'ny maha-mampiahiahy kokoa ny olona mandray ny zava-mahadomelina, saingy mijaly noho ny aretina malabsorption izy ireo.
Ny fikorontanan'ny taova na cholestasis
Izany dia toe-javatra izay misy ny fanakanana ny fikorianan'ny bile mankany amin'ny aty. Misy tatitra maromaro izay mampifandray ny orlistat amin'ny ratra amin'ny aty mafy, na dia miseho amin'ny tranga tsy fahita firy na amin'ny fatra avo lenta izany.
Aretina amin'ny gaza
Anisan'izany ny cholecystectomy sy ny sendran'ny astrofa.
Ny toe-pahasalamana hafa tokony hambara amin'ny mpitsabo anao dia ahitana ny VIH, ny aretin'ny tiroidia, ny voa, ny fanasitranana, na ny pancreatitis. Amin'ny fisamborana na fifanjevoana, ny orlistat dia mety hampitsahatra ny fitsaboana ny antiepileptic amin'ny alàlan'ny fanelingelenana ny fitsaboana.
Ny sasany amin'ireny aretina ireny dia ny bulimia sy ny anorexia. Ary koa, tsy ilaina ny maka orlistat raha tsy matavy ianao.
Fahendrena ny mampahafantatra amin'ny mpitsabo anao raha toa ka mihinana fanafody hafa ianao, indrindra ireo izay mety hanakana ny hery fiarovan'ny vatana. Ny fifampiraharahana amin'ny zava-mahadomelina dia hanelingelina ny fivarotam-panafody, izay mitarika fiakarana na fihenan'ny iray amin'izy ireo. Ohatra, ny orlistat dia hanelingelina foana ny mekanin'ny fanafody voatendry amin'ny famindrana taova.
Raha toa ka eo amin'ny cyclosporine ianao, dia mety hilaza aminao ny dokotera amin'ny alàlan'ny orlistat. Na izany aza dia mbola afaka manatanteraka izany amin'ny alalan'ny torolalana hentitra ihany ianao. Raha tokony ho eo amin'ny toerana azo antoka dia tokony halaina am-bolana farafahakeliny mialoha ity fanafody entin-tanana ity na adiny roa aorian'io.
Ankoatr'izay, tokony holazainao daholo ny fanafody prescription sy tsy prescription, sakafo fanampiny, vitamins, antikoagulants, na vokatra legioma mety ho azonao.
Vehivavy bevohoka sy mampinono
Io fanafody entina amin'ny fitsaboana io dia tsy ho an'ny reny mitaiza, na iza na iza mieritreritra ny hitoe-jaza, na ny miezaka mampinono. Ny zava-mahadomelina dia mety tsy hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny lozam-pifamoivoizana ary hanimba ny foetus.
Na dia mbola tsy mazava aza ny fandehanana any an-tratran-dreniny ny orlistat, aleo manalavitra azy io ary mahatsiaro ho voaro, toy izay manenina.
Orlistat dia inona no olona mila diabeta hanatsara sy hifehezana ny siramamy ary hampivoatra ny fandeferana glucose. Na izany aza, tsy maintsy manara-maso matetika ny siramamy ianao ary manao fitsidihana matetika amin'ny dokotera. Ny fanaovana izany dia manampy anao hahalala hoe rahoviana ny hanitsiana ny fanafody diabeta, ny sakafo ara-dalàna, ary ny fandaharam-panentanana tokony hatao.
Tahaka ny ankamaroan'ny fitsaboana, ny orlistat dia manana fiantraikany miavaka. Ny vokatry ny tsimokaretina voalohany dia hita matetika amin'ny fahazaran-tsinontsinona. Na izany aza, dia mety ho hita miharihary mandritra ny herinandro vitsivitsy voalohany ny fitsaboana azy.
Ho an'ny olona sasany dia mety hianjera ny soritr'aretina amin'ny hafa; Mety mitohy manerana ny orlistat izany. Amin'io fotoana io, dia fahendrena ny mampahafantatra amin'ny dokotera anao. Arakaraky ny toe-pahasalamanao kokoa ny fihinanao sakafo matavy loatra, dia mety kokoa noho izany ny fihenan'ny vokatra hafa.
Ireto misy fiantraikany mahazatra;
Na dia tsy mampidi-doza aza, ny steatorrhea dia ny fisian'ny menaka sy ny fatana tafahoatra ao amin'ny trano fivarotana. Satria ny orlistat dia manakana ny lipase, dia tsy hisy fanasitranana asidra maimaim-poana. Ho vokatr'izany, hiseho amin'ny fomba marefo sy manjombona ireo voanjo.
Mba hifehezana an'io vokatra io dia tokony hialana ny sakafo manankarena amin'ny kalôria sy ny haavo matavy. Araka ny fenitry FDA, ny vola dia tokony ao anaty 0.53 ounces ary tsy mihoatra ny 30%.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny gaza dia mandalo amin'ny tsiranoka solika. Tsy maintsy hodinihinao ny akanjonao na ny kilonganao ambany noho ny sasin-tsakafo.
Fetra tsy fetezana
Fihetseham-panoherana mihenjana, maika ary matetika amin'ny fihenan'ny tsinay
Ny tsy fahampiana sy ny fanaintainan'ny alikaola
Zana-tsokajy tsy ara-dalàna
Hazo siramamy ambany
Izany matetika no ataon'ny olona manana diabeta II.
Ny tranga toy izany dia tsy fahita firy, saingy hitranga rehefa manana olana amin'ny atiny ianao, na mihinana fatra ambony. Tamin'ny 2010, ny FDA dia nampitandrina fampitandremana momba ny fiarovana ireo marika orlistat, izay manondro ny mety ho ratra amin'ny aty.
Na izany aza, io fiatraikany io dia mbola adihevitra mihevitra ny fandinihana tranga iray hafa navoaka tao amin'ny British Medical Journal izay nanondro raha tsy izany.
Ny sasany amin'ireo famantarana famantarana ny aretina ao an-tsa dia ahitana ny fitefena, ny fanaintainana ao an-kibony, ny fanariana hoditra, ary ny fanasitranana maizimaizina.
Fihetseham-po tsy mandeha tsara
Tsy dia fahita firy loatra ny fanandramana amin'ny fihenan-tsakafo na ny fihetsika tsy mahazatra rehefa mandray orlistat fanafody. Ho an'ny olona sasany, ireo zavatra tsy voatanisa ao amin'ny zava-mahadomelina dia mety miteraka zava-mahadomelina, manifikifika, mangeja, vatana, fahasarotan'ny fofona, na fanindronana.
Ny lafiny hafa tsy dia mahazatra loatra dia ahitana ny tebiteby, ny aretin'andoha, bloating, ny tsy fahatomombanana amin'ny tadiny, ny harerahana, ny faniriana ambany ary ny vony. Raha mahatsapa soritr'aretina manaitaitra ianao, dia tokony hampahafantarinao ny dokoteranao avy hatrany na hitaterana amin'ny FDA Reporting Program.
Fanapahan-kevitra farany amin'ny vovoka Orlistat
Na dia manana voka-bary vitsivitsy aza ny orlistat, dia fitsaboana mahamay be izany, izay hahavokatra vokatra ao anatin'ny roa herinandro. Ny tsiambaratelon'ny tombontsoa avy amin'ity zava-mahadomelina ity dia manaraka ny torolàlana, ny fahatakarana ny fepetra fisorohana, ary ny fanaraha-maso ny sakafo.
Rehefa mandray orlistat ianao, dia zava-dehibe ny manaraka ny fandaharam-bokatra mahasoa, mandany tsiranoka tsy dia matavy loatra, ambany, ary manao fanatanjahan-tena matetika. Ny sakafo tokony atao dia tokony ahitana voankazo, legioma ary voamaina. Ankoatr'izay, tokony hampitombo ny sakafo fihinanao amin'ny vokatra multivitamin ilaina ianao satria orlistat dia manakana ny fiterahana vitaminina matavy.
Rehefa misy ahiahy dia azonao atao ny manatona ny dokotera na ny dokoteranao mba hahazo torolàlana fanampiny. Azonao atao koa ny manatona ny fitehirizana sakafo sy ny fitsaboana amerikana amerikana amin'ny fangatahana rehetra na ny fitaterana ny vokatra hafa mampidi-doza, izay tsy voatanisa.
Ahoana no hividy Orlistat vovoka (96829-58-2) avy any AASraw
1.Toy ny contact us amin'ny mailaka rafitra fanadihadiana, na skype an-tserasera solontenan'ny mpanjifa (CSR).
2.To manolotra anay ny habetsahana sy ny adiresinao.
3.Our CSR dia hanome anao ny teny nindramina, ny fandoavam-bola, ny laharan-tariby, ny fomba fitaterana ary ny daty fahatongana (ETA).
4.Payment vita ary ny entana dia alefa amin'ny ora 12 (Ho an'ny filaminana ao amin'ny 10kg).
5.Goods nandray sy manome fanamarihana.
acid-Aminobutyric acid (GABA: 56-12-2)
Nicotinamide ribosida klorida
Alpha GPC vovoka
Fanamboarana ny vokatra
Nootropics vovoka (14)
Anti homamiadana (16)
Powder Urolithin (2)
Hormones vehivavy (20)
Estradiol poids Series (4)
Hormonal Enhancing Sex (12)
Fampiasan'ny lehilahy (3)
Vokatry ny vinaingitra (15)
Ny hafa (62)
Cetilistat vovony menaka noho ny fahaverezan'ny fahavoazana
Orin-turinabol vovoka: Fantatrao ve ny zava-misy momba ny voly steroid?
Inona ny zava-mahadomelina mahomby indrindra amin'ny fitsaboana kanseran'ny nono?
Inona no fampiasana Nandrolone decanoate?
PCT Letrozole vovoka manta — Zavatra dimy tokony ho fantatro !!!
Zava-mahadomelina fanoherana ny homamiadana Acalabrutinib: Fitsaboana ho an'ny CLL / SLL / MCL
Tantaran'ny Cabozantinib fahombiazana amin'ny fitsaboana kaner
Inona no fampahalalana tokony ho fantatrao alohan'ny hampiasana Erlotinib
Famerenana Dacomitinib: Ahoana ny fomba hitondrana ny NSCLC?
Copyright © 2021 aasraw Zo rehetra voatokana.
Fialana andraikitra: Tsy manao fanambarana momba ny vokatra amidy amin'ity tranonkala ity izahay. Tsy misy fampahalalana omena an'ity tranonkala ity izay nohamarinin'ny FDA na MHRA. Izay fampahalalana omena ato amin'ity tranonkala ity dia omena araka ny fahalalantsika azy ary tsy natao hanolo ny torohevitry ny mpitsabo mahay iray. Ny fijoroana vavolombelona na ny valin'ny vokatra nomen'ny mpanjifanay dia tsy fijerin'ny aasraw.com ary tsy tokony horaisina ho toy ny tolo-kevitra na zava-misy.
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.fisfera.fr www.cmoapi.com www.domasign.com